Globecast နှင့် PSSI Global Services တို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီဒီယာ ၀ န်ဆောင်မှုပူးပေါင်းမှုတိုးချဲ့မှုကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Globecast နှင့် PSSI ကို Global န်ဆောင်မှုများတိုးချဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာန်ဆောင်မှုများပူးပေါင်းကြေညာ
Globecast နှင့် PSSI ကို Global န်ဆောင်မှုများတိုးချဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာန်ဆောင်မှုများပူးပေါင်းကြေညာ
Globecast, မီဒီယာများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ပေးသူ, က၎င်း၏ဖောက်သည်များအတွက်မီဒီယာဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အလှူငွေန်ဆောင်မှုမြှင့်တင်ရန်, PSSI ကို Global န်ဆောင်မှုများ, ပြည့်စုံသောအဖြစ်အပျက်, ဂီယာနှင့်ဆက်သွယ်မှုဖြေရှင်းချက်၏ပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ရဲ့ကြေငြာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားကိုအမေရိကန် backup လုပ်ထားန်ဆောင်မှုတယ်လီပို့, သတင်းနှင့်အားကစားဖြစ်ရပ်များ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူးပါဝင်သည်, နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတကာ programming ကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
သဘောတူညီချက်၏တစိတ်တဒေသအဖြစ်, Globecast သုံး Ku-band ပါဝင်သော PSSI, ကနေက Galaxy 19 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရုပ်သံလိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဝယ်ယူထားပြီး ဂြိုဟ်တု transponders နှင့်ဆက်စပ်နေသောဖောက်သည်။ ဒီအစီအစဉျကိုဖောက်သည်များ၏ Globecast ရဲ့ပြီးသားကျယ်ပြန့်သည် Galaxy 19 suite ကိုကြီးထွားများပြားစေခြင်းနှင့် 60 ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ငံတကာရုပ်သံလိုင်းစျေးကွက်ကို Globecast ရဲ့ကတိကဝတ်တိုးပွားစေပါသည်။ PSSI ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတယ်လီပို့ဤစီမံကိန်းများ၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်က Galaxy 19 ဖောက်သည်အသိုင်းအဝိုင်းမှန်ဆောင်မှုများကို Globecast နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါမိတ်ဖက်လည်းသတင်းနှင့်အားကစားဖြစ်ရပ်များကိုနိုင်ငံတကာအလှူငွေနှင့်ဖြန့်ဖြူးလိုအပ်နေဖောက်သည်များအတွက်န်ဆောင်မှုမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်: Globecast PSSI ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတယ်လီပို့နှင့် SNG ယာဉ်များ PSSI ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်စင်းကိုအသုံးချပါလိမ့်မယ်။
"ကျနော်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာ Globecast အတူကြီးမြတ်သဘောတူညီချက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အလေးပေးပြောင်းလဲချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ကြရန်မှာရှာဖွေနေရောက်လာသောအခါဤအကြားဆက်ဆံရေးနှစ်ဦးစလုံးကုမ္ပဏီများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအသိဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကျနော်တို့ပြီးသားအကျိုးကျေးဇူးများကိုမြင်လျှင်နေကြတယ် "ဟုရောဘတ်သိုးသငယ်, CEO ဖြစ်သူ PSSI ကဆိုသည်။
Globecast နှင့် PSSI ယခင်က PSSI / မဟာဗျူဟာရုပ်မြင်သံကြားကထုတ်လုပ်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များ၏ဖြန့်ဖြူးအပေါ်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအသစ်စာချုပ်ကုမ္ပဏီများနှင့်ထဲမှာခေါင်းဆောင်အဖြစ်ထပ်မံရာထူး Globecast နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်နိုင်ငံတကာဖြန့်ဖြူးခွင့်အလမ်းများကိုချဲ့ထွင်ပါလိမ့်မယ် ဂြိုဟ်တုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရုပ်မြင်သံကြား programming ကို -delivered ။
က Galaxy 19 သဘောတူညီချက် PSSI ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတယ်လီပို့ Globecast ရဲ့ Culver စီးတီးမီဒီယာစင်တာတွင်ယခုနောက်ထပ်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ PSSI ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတယ်လီပို့ကိုထောကျပံ့လိမ့်မယ်နေစဉ်, ဖောက်သည်များနှင့် Globecast မှလုပ်ငန်းလည်ပတ်ထောက်ခံမှုများကိုဆက်လက်အတူဇူလိုင်လခုနှစ်တွင်ပိတ်ခဲ့သည်။
Eddie Ferraro, မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ, အမေရိက, Globecast ဤ Globecast နှင့် PSSI နှစ်ဦးစလုံးအဘို့ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည် "commented ။ ကျွန်ုပ်တို့က Galaxy 19 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်နေစဉ်, ငါတို့သည်ငါတို့၏သက်ဆိုင်ရာအရှေ့နှင့်အနောက်ကမ်းခြေရှိနေခြင်းအပေါ်တည်ဆောက်ခြင်း, ငါတို့ပေးနိုငျနောက်ထပ်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာအလှူငွေ / ဖြန့်ဖြူးမိတ်ဖက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာလကြာရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးပြုလုပ်ရန်သဘောတူမှတဆင့်ချက်ချင်းဖောက်သည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပို့ဆောင်နေပါတယ်။ "
ရုပ်သံလိုင်းဖြန့်ဖြူး ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူး အထောက်အပံ့ ဂြိုဟ်တု လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ 2019-09-03
ယခင်: LiveU နှင့် Griiip ထူးခြားသောတပ်အားကစားတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဒေတာများ-Driven မီဒီယာဖြေရှင်းချက်ပလက်ဖောင်းမိတ်ဆက်
နောက်တစ်ခု: နွေရာသီ 2020 ဘွဲ့လွန်သုတေသန International